Realme X2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain | Androidsis
Joogitaanka Realme ee suuqa ayaa si weyn kor ugu kacaya. Astaantu waa ta ugu koraysa suuqa adduunka, sideed ku ogaatay dhawaan. Intaa waxaa dheer, toddobaadyadan toddobaadyada taleefannadooda nooca ayaa laga bilaabay Spain. Hadda waa waqtigii siidayn rasmi ah oo cusub, midka Realme X2. Telefoonku wuxuu horeyba u yimid Spain.
Muddo bil ka yar ayaa laga joogaa markii si rasmi ah loo soo bandhigay, Taleefankan waxaa loogu talagalay heerka dhexe ee heerka Shiinaha. Realme X2 Waxaa loo soo bandhigay sidii taleefan xiiso leh qaybtaas suuqa. Marka waa hubaal inay tahay ikhtiyaar loo tixgeliyo isticmaaleyaal badan.
Telefoonku wuxuu ku yimid naqshad casri ah oo ku saabsan Android. Shaashad ku samee qadar yar oo ah qaabka dhibic biyo ah, in kastoo wax yar oval ah. Marka hore ee horteeda si wanaagsan ayaa loogu adeegsadaa kiiskan, marka lagu daro inay leeyihiin shaashado wanaagsan oo shaashadda ah. Dhabarka gadaashiisa waxaa ku yaal kamarad afar geesle ah, halka dareeraha sawirka faraha uu ku yaalo shaashadda hoosteeda.
1 Tilmaamaha Realme X2
Tilmaamaha Realme X2
Realme X2 waa a ikhtiyaar wanaagsan oo dhex-dhexaad ah. Waxay ku timaadaa taleefan aad isu dheellitiran, oo shaki la’aan si fiican u qaban doona wakhti kasta marka la eego waxqabadka. Kaamirooyinka ayaa shaki la’aan ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee tusaalahan, kaas oo noo oggolaan doona inaan sawirro waaweyn ka qaadno mar walba. Haddii kale waxay u qabataa si aad u wanaagsan, labadaba awoodda, waxqabadka iyo madax-bannaanida. Kuwani waa faahfaahinta buuxda ee taleefanka:
Shaashad: 6,4-inch AMOLED leh FullHD + xal 2,340 x 1,080 pixels (19.5: 9).
Processor: Octa-core Snapdragon 730G xawaare ugu sarreeya oo ah 2.2 GHz iyo 8 nm
Kaydinta gudaha: 64/128/256 GB
Kaamirada gadaal: 64 MP oo leh f / 1.8 aperture + 8 MP 119 darajo balaaran + 2 MP bokeh + 2 MP macro
Kaamirada hore: 32 MP oo leh f / 2.0 aperture
Batariga: 4.000 mAh oo si dhakhso ah u socota 30W
Isku xirnaanta: 4G / LTE, Dual SIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, Minijack, USB-C
Kuwa kale: Dareemida faraha faraha shaashadda, NFC
Cabirrada: 158,7 x 75,2 x 8,6mm
Miisaan: 182 garaam
Sida aad u aragto, waa ikhtiyaar xiiso u leh qaybtan suuqan. Waxaa loo soo bandhigay sidii taleefan aad u dhameystiran, oo leh kaamirooyin wanaagsan, kuwaas oo shaki la'aan ah dhibicdiisa xoogan. Maaddaama dareeraha 64 MP uu yahay wax aan bilaabeyno inaan xoogaa ku aragno suuqa, sidaas darteed waa xiiso. Intaa waxaa dheer, waxaa weheliya iskudhaf wanaagsan oo dareemayaal ah, xagal balaaran, dareemayaal makaro iyo mid kale oo loogu talagalay bokeh, taas oo shaki la'aan noo oggolaan doonta inaan sawirro fiican ka qaadno mar walba.
Batariga taleefanka ayaa ah dhinac kale oo xiisaha leh, maadaama ay nooga tagayso awood wanaagsan oo ah 4.000 mAh kiiskan. Marka Realme X2 wuxuu ina siinayaa ismaamul wanaagsan. Marka lagu daro haysashada lacag 30W dhakhso ah oo la heli karo. Dareemida faraha ayaa ku jirta xaaladdan shaashadda hoosteeda, maadaama ay aad ugu badan tahay suuqa iyo gaar ahaan qaybaha sida heerka dhexe ee heerka.
Realme X2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain. In kasta oo markan aan helayno nooc gaar ah oo aaladda ah marka la eego RAM iyo kaydinta. Lama oga in noocyada kale ee taleefanka laga bilaabi doono dalkeena iyo in kale. Laakiin waa inaan sugnaa shirkadda lafteedu si ay u xaqiijiso wax badan oo ku saabsan bilaabista dhowaan. Noocdan la sii daayay waxaan ku haynaa dhammaan xogta.
Waxaa lagu sii daayay nooca 8/128 GB, oo hadda laga heli karo oo keliya Amazon. Lama bilaabin bakhaarro badan, mana aha mid muuqaal ah, laakiin waxaa la filayaa in tani ay dhowaan dhici doonto. Qiimaha noocaan ah Realme X2 taas waxaa laga bilaabay Spain waa 299 euro, sida aad ku arki karto Amazon. Marka waa qiime wanaagsan qaabkan dhexdiisa inta u dhexeysa heerka ugu sarreeya ee astaanta. Maxaad u maleyneysaa ku soo bandhigida taleefankan Spain?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Realme X2 waxaa si rasmi ah looga bilaabay Spain
Samsung waxay muujineysaa taleefankeeda cusub ee laaban karo oo fiidiyoow ah
Muunadda ugu horreysa ee kamarad ah Xiaomi Mi CC9 Pro waxay faahfaahin ka bixineysaa faa'iidooyinka dareemaheeda 108 MP